अपदस्थ श्रीमान ! खोई २ करोड २९ लाखको सुविधा सम्पन्न सरकारी गाडी ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अपदस्थ श्रीमान ! खोई २ करोड २९ लाखको सुविधा सम्पन्न सरकारी गाडी ?
काठमाडौं । मन्त्री, प्रशासक र संबैधानिक निकायका प्रमुखहरु पदबाट हटेको सात दिनभित्र राज्यबाट लिएका सवै सुविधाहरु फिर्ता गर्नपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर राज्यकोष दोहनगरी महँगा सवारीसाधन लिनेहरुको सूचि भने निकै लामो बन्न थालेको छ ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र र जन्ममिति विवादमा परेपछि गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशबाट बाध्यकारी राजीनामा दिए । राजीनामा दिएर घर फर्केको आधा बर्ष बितिसकेको छ । तरपनि उनले प्रधानन्यायाशीशकारुपमा लिएका सुविधाहरु अझै त्याग गरेका छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीशबाट विदा हुँदै गर्दा पराजुलीले १ करोड २९ लाखमा गाडी खरिद गरेका थिए । तर घर जाँदा उनले सर्वाधिक महँगो गाडी सँगै लिएर गएका छन् । १ करोड २९ लाखको गाडी उनले अझै फिर्ता गरेका छैनन् । सर्वाेच्च अदालतको नियमावलीमा पदबाट हटेको ७ दिनभित्र सवै सुविधाहरु बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर पराजुली पदबाट हटेको आधा बर्ष वितिसकेको छ । उनले न गाडी फिर्ता गरेका छन् नत अन्य सुविधा नै फिर्ता गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले गाडी फिर्ता गर्न लिखित पत्र पनि पठाएको छ । तरपनि उनले अटेरी गरिरहेका छन् ।
राज्यकोषको दोहनगरी सरकारी सुविधामा रमाउने पूर्वमन्त्री, प्रशासक र संबैधानिक निकायका प्रमुखलाई कुनै पनि कारवाही हुन सकेको छैन । पदबाट हटेपछि पनि सवैभन्दा बढि सुविधान निर्वाचन आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरुले लिइरहेका छन् । २९ सवारी साधनहरु निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी सवैभन्दा बढि सुविधा लिने राज्यको निकाय हो, गृहमन्त्रालय । गृहमन्त्रालयका पूर्व सचिव र पूर्वमन्त्रीले पनि राज्यकोषको दोहनगरी सुविधा लिइरहेका छन् ।
कालोबजारी गर्नेलाई सरकारको यस्तो तयारी
काठमाडौँ, सरकारले इन्धन अभावका नाममा कालोबजारी गर्ने र अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारबाही गर्ने भएको […]
लगानी गर्न आएका २८ मध्ये दुई कम्पनी मात्र सम्पर्कमा
काठमाडौं । करिब तीन वर्षअघि विदेशी लगानी भित्र्याउने स्वीकृति लिन खोजे सम्पर्कविहीन भएका २८ मध्ये दुई कम्पनी […]
अमेरिकामा भिडियो कल गरेर नेपाली युवकद्धारा आत्महत्या
क्यालिफोर्निया । साथीसँग फोनमा कुरा गर्दागर्दै एक नेपाली युवाले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पासो लगाएर […]
टर्कीको राजधानी अंकारामा शक्तिशाली विस्फोट, २८ मारिए
एजेन्सी, टर्कीको राजधानी अंकारामा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा परी कम्तिमा पनि २८ जनाको मृत्यु भएको छ […]
बढ्दो चिसोमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका उत्तरी गोरखाको सिर्दिवासका भूकम्पपीडित परिवारको दैनिकी । भूकम्पले घर […]
यी हुन् सफल जीवनका अमुल्य सुत्रहरु, सफल कसरी हुन सकिन्छ ? एकपटक सुन्नुहोस्
काठमाडौं । मानिसहरु संसारमा आत्तिन्छन् थोरै दुख हुदाँ भने मातिन्छन् सुख प्राप्तिपछि । आत्तिने र मातिने […]